‘बहुलोकगण’ – Gulmiews
June 17, 2016 Sanju Kauchha
म होइन, हामी भन्नुपर्ने अवस्थामा हामी को हौ ? हामी कहाँ छौ ? हाम्रो अवस्था के छ ? र हामी रहेको माटोमा अहिले के भइरहेको छ ? के हजूरहरुलाई आफ्नो माटोप्रति माया, ममता छ ? के तपाईंलाई यि विषयहरुमा थाहा छ ? थाहा छ भने भनिहाल्नुहोस्, होइन भने म भन्छु । त्यो हो पछिल्लो पटक नविनतम् र सर्वोत्कृष्ट शासन पद्धति मान्दै लागू गरिएको छ, जसको नाम ‘म’ पण्डितले ‘बहुलोकगण’ राख्न चाहेको छ । बहुदल + लोकतन्त्र + गणतन्त्र ≠ बहुलोकगणको स्वरुप निर्माण हुन्छ भन्ने सूत्र बनाउन खोजिएको हो । यसमा धेरै कुराहरु छन् र थपिन पनि सक्तछन् । कसैको थुक्दा थुक्दै थुकै सुकेको छ । यसैमा कोही चुस्दा चुस्दै चुकेको छ । कोही लुट्दा लेट्दै लुकेको छ भने कोही त छट्पटाउदै छुटेको पनि छ । जे होस् आ–आफ्नै बहुल खाले वेदना सबैलाई छ । लोकहीतका लालित्यको लामा लस्कर छ । कणदेखि गणसम्म गनगन छ । क्रान्तिको नारा दिन जति सजिलो छ । मानिसको विचार श्रृंखलामा क्रमिक रुपमा परिवर्तन ल्याउन त्यत्तिकै कठिन पनि छ । अहिले यहाँ मानव रुपी दानवता र अधीरहरुको हावी छ । मानवताको नाताले जहा“ जहिले पनि सजिलै जिउन सकिन्छ तर दानवताको मातले कहिल्यै पनि दीर्धकालीन जीवन दिदैन । धीर जनहरु सुनेको सम्झना राखिकन भुल्दैनन् । अधिर जनहरु आरोप प्रत्यारोपमा आलिशान महल बनाउँछन् । तर मानव, दानव र अधिरहरु सबैले यहा“ आ–आफ्नो कर्मको फल पाइरहेका छन् ।
जति दमन हुन्छ, त्यति प्रतिरोध हुन्छ । जति विनास हुन्छ, त्यसको हजारौ गुणा विकास हुन्छ । सय मरेर हजार जन्मिन्छन् । बीउ रोपेर बाली भित्राइन्छ । खेति गरेपछि भोकै मर्नु पर्दैन । कर्म गरेपछि फल पाइन्छ । जसले जस्तो बीउ रोप्छ । जति पसिना बगाउ“छ, उसले त्यस्तै खाले बाली स्याहार्छ । भन्ने जस्ता भनाईहरुलाई यहाँनिर सान्दर्भिक रुपमा राख्न खोजिएको छ । जति उत्साह र उमङ्गका साथ हाम्रो घरमा, माटोमा बहुदल÷प्रजातन्त्र भित्रिएको थियो, त्यो अहिले निराशा प्रायमा परिणत भएको छ र त्यसले हाम्रो पुण्य पनि साथै लगेजस्तो पनि छ । जसका घरबाट अतिथि निरास भएर फर्कन्छ, त्यसले त्यस घरका धनीलाई पाप छोडेर आफू उसको पुण्य लिएर जान्छ भन्ने हितोपदेश हाम्रो माटोमा लागू भएको देख्न सकिन्छ । तुच्छ वस्तुबाट सुवर्ण निक्लन्छ भने निकाल्नु पर्नेमा बहुमूल्यबाट बम निस्के पनि राख्ने प्रवृति हामीमा हावी भयो । यहा“ अति गर्नाले नै दिनका दिन खति सहनु परिराखेको छ । खतिको अवसरमा बिगे्रको मतिलाई उपयोग गरी लागू छ बहुलोकगण । अति सुन्दरताको कारणले सीताको हरण भयो, अति गर्व गर्दा रावण म¥यो, अति दान दिंदा बलिले बा“धिनु परेको कुरा हाम्रै सामू छर्लङ्ग छ । यसैले अति सर्वत्र बर्जित छ ।
आज जसरी मिश्रित अर्थ व्यवस्था लागू छ, त्यसैगरि मिश्रित शासन व्यवस्था पनि भर्खरैदेखि विद्यमान छ हाम्रोमा । अचम्मको परम्परा के छ भने कुनै पनि कुरो सकभर पुरानो नदोहो¥याउँने अर्थात नया“ लागू गर्ने, नया“ रुप हेर्ने । यसै सन्दर्भमा यो मिश्रित शासन पद्धति बा“की थियो र ल्याइयो या आयो । आज हामी त्यसैमा अभ्यासरत छौ महरु हामी भएर । मिसिएपछि कसैको पनि नकारात्मक तत्वको अस्तित्व रहदैन । हाम्रो माटै अचम्मको बहुरुपी रहेछ । त्यसैले जसले पनि बहुगुण भएको रुचाउ“छ वा मिश्रित भएको मन पार्दछ । भेषभुषा तथा भाषाभाषी त्यस्तै छन् । रीत र गीतहरु त्यस्तै छन् । संस्कार संस्कृति पनि त्यस्तै । जात जाति पनि नमिसिएका कहाँ पो छन् र † बजारमा कुनै सामान किन्न जानुस् मिसावट रहित पाउनु सु“गुरले सराक देख्नु सरह हुन्छ । कुरा जे भए पनि मिश्रितबाट धेरै फाइदा छ भनिन्छ । कसरी भने सबै थोक एकै पटक, एकै नजरमा देख्न सकिने, सबै चिजको एकै गासमा स्वाद पाउन सकिने, सबैतिर आफ्नो इच्छा अनुसार स्वार्थ लिन सकिने जस्ता कुराहरु के घाटाका कुरा हुन् र ? त्यसैले पनि चलनमा छ बहुलोकगण ।
यहाँ के छुट छैन र ? कुटपिट गर्न, गुटफुट हुन अनि अबला मुटु भुटुटु पार्न स्वतन्त्रता छ । बहुदल छ । बहुलवाद छ । लोकको हीतका लागि लोकतन्त्र आयो । लोकमा लाजलाग्दा कार्य भएको पनि फलाकियो । कण कणमा गणतन्त्र छ । त्यसैगरि मन्मन्ति मनोनित छ र त बहुलोकगण छ । यहा“ गर्नु पर्छ भनेको गर्नै पर्छ भन्ने केही छैन । बरू गर्नु हँुदैन भनेको गरेमा प्रतिष्ठित हुन पाइन्छ । ऐन, नियम अनुसार भएको देख्न पाऊँ भन्नु हुट्टिट्याउले सराक थाम्नु जत्तिकै छ । ‘क्या मिठो पीठो, ओडाल्यो ढिडो, गुन्द्रक तिहुन, कुप्लुक्क खायो, घुप्लुक्क सुत्यो, धन्य हो जीवन ।’ भन्दै हामी सबैको धर्म प्रजातन्त्र, जात मानव र गोत्र राष्ट्रियता मान्नु पर्नेमा बहुधर्म र बहुजातको मार्ग विचरण गर्दै बहुलोकगणको विमानस्थालसम्म आइपुग्नु परेको छ । अब हामी कहाँ लगियौला कुन्नी †?
(घर्ती गुल्मीका पुर्व सहायक सिडियो हुन् ।)